Qorshehoodii iyo kii waqtiga - NETBEINS
:Qorshehoodii iyo kii waqtiga
Qorshehoodii iyo kii waqtiga
Dhallinyaro reer Muqdisho ah, saaxibo ah, aadna isugu xiran isku xaafad iyo isku iskuulna ah, ayaa sanadku markuu ahaa 2002-dii ku heshiinaya marka ay dugsi sare dhammeeyaan iney dibadda waxbarasho u doontaan. Marka laga billaabo xiliga ay qorshaha dejinayaan, dugsiga sare waxey dhammeynayaan 2006, marka loo eego sanad dugsiyeedka iskuulka ay dhigtaan.
By admin April 13, 2019, 7:14 PM
Ardeydu waxey gaarayeen tiro ahaan 10 arday, oo isku fasal ah, badan koodna isku xaafad ka iman jiray, 7 ka midana koox xaafadeed banooni ka wada tirsanyihiin. Waxey isku ballansanayaan in afarta sano ee ay dugsiga sare ku jiraan, qofkasta oo ka mid ah in uu la yimaado lacagtii uu waxbarashada jaamacadeed ee dibadda ku dabari lahaa, ku safri lahaa, kuna noolaan lahaa ugu yaraan muddo 5 4 sano ah. Waxey isla qaateen ineysan jirin dal ay qasab tahay in ay tagaan, balse la aado dalkii u fududaada, gaar ahaan wadamadii markaas dhalinyarta Soomaalidu waxbarashada sare u doonan jirtay sida dalalka Suudaan, Masar, Pakistaan, India iyo Maleysiya, waxayse inta badan u codeeyeen dalalka Pakistan iyo Maleysiya.
Sidaas darteed lacagta qofkasta laga rabo waxaa lagu jaan gooyey qiimaha xiligaas qofka ardeyga ah wax uga baran karay, kuna noolan karay Pakistaan iyo Maleysiya, waxaana la isku ballansaday in qofkastaa muddadaas afarta sano ah ku raadiyo lacag gaareysa 9,000$ kun ilaa 10,000$ kun. Inta badan marka iskuulka laga maqanyahay waa ay kulmaan, oo kubadda ayey wada ciyaaraan, habeen kii ayey wada caweeyaan markaas ayaana la iska dhageystaa warbixin ku saabsan ninkasta iyo waxa u qabsoomay. Waxaa la isku dhaarsaday in qofkii walaashiis la qabo uu seedigiis garab weydiisto, kii reer kiisu dhul leeyihiin loo gado, kii dibadda loo jiro qeyla dhaan dirsado, qofkii miyiga reer kiisu dagan yihiinna xoolo loo soo iibiyo, laakiin marna aan laga soka marin yoolka iyo sida ballanku yahay.
Waqti kadib waxaa la gaaray gunnaanadkii sanad dugsiyeedka, intii ka horreysayna waxaa Jiray horumar dhan walba ah oo qofkasta xaaladdiisa halka ay marayso waa lala socday. Maalintii qalinjabinta ee Shahaadooyinka lasoo qaatay, ayaa la is xisaabiyey, waxa uu qofkasta haysto iyo sida lagu wada bixi karo.
Waxaa soo baxday in seddex ka mid ah kooxda reerkoodu uu u helay (Scholarship) waxbarasho Suudaan ah, sidaas darteed iyaga lacagtii loogu badalay halkaas. Waxaa kale oo soo baxday in labo ka mid ah iyagana lacagta loo ogolaaday, laakiin Shuruud looga dhigay iney tagaan dalka Uganda, sababo la xariirta in ay halkaasi dagan tahay Eedadood. Shantaas marka laga reebo 5 tii kale oo haysta lacagtii lagu ballamay, diyaarna u aha meeshii lagu heshiiyo in ay aadaan ayaa soo haray. 5 tii dambe waxey isku raaceen in ay tagaan dalka Pakistaan, halkaasna ay guri wada dagaan, noloshana isku meel ku wajahaan, oo wixii qeyb sami kara isla qeybsadaan.
Dhawr habeen ka hor bixitaan kii kooxdii Pakistaan ku heshiisay, ayaa wiil ka mida kooxdaas isugu yeeray dhammaan dhallinyaradii wuxuuna tusay inuu haysto lacagtii 10,000$ oo kaash ah, laakiin inuusan baxeyn, meelnana Soomaaliya uga socan ayuu u sheegay, sababtana uusan la wadaageyn, keliya wuxuu u raaciyey in waqtigu kulmin doono mar uun, oo ama isagu meesha ay joogaan ugu tagi doono ama iyagu inay u iman doonaan meel ay ahaataba. Si kasta oo ay isugu dayaan in ay ku qanciyaan, haddana ma suurtagalin taas badalkeeda 9 kii kale isaga ayaa maalin walba macsalaameynayey.
Wiilkii haray wuxuu qaaday lacagtii kaashka ahayd, wuxuuna tagay Jaamacadda Banaadir, oo markaas cusbayd, wuxuu u geeyey lacagtii oo dhan, wuxuuna ku yiri maamulkii lacagtaan iyada dhan qaata, laakiin ogaada waxba iigama dambeeyaan, waxaan rabaa kulyadda caafimaadka (Medicine) inaan barto, buug iyo imtixaan iyo lacag dambe ima weydiin kartaan anigoon shaqeysan, weliba waxaa intaas idin dheer xitaa meel aan seexdo mahaysto. Jaamacaddu lacag intaas la eg oo isku xiran waa ubaahnayd, waxeyna kula heshiiyeen in wixii lagu yeesho uu iska gudi doono markuu shaqo helo, haddana uu fasax u yahay maktabadda Jaamacadda iyo fasalkiisa.
Simester kii 3-aad ee Jaamacadda markuu marayey, ayaa waxaa jaamacadda soo booqday hay’adda MSF Spain oo waqtiyaas dalka ku cusbayd, waxeyna ka Jaamacadda Banaadir ka codsatay iney ubaahantahay shaqaale hal galin (Part time) u shaqeeya, oo kal-kaaliye caafimaad ah. Jaamacaddu waxey usoo jeedisay hay’addiii wiilkii kooxda ka haray. Sidaas ayuuna ugu shaqo billaabay hay’adda MSF Spain, waxeyna ku qaateen mushaar gaarayaa 700$, markaas, simester kale kadibna waxey uga dhigeen 1,200$, markastoo lix billood la joogo mushaarkiisa kor ayuu u socday sidoo kalena waxaa sii laba jibaarmayay xuquuqdiisa shaqaalenimo, sida inuu iney siinayeen caymis caafimaad, baabur, sahay safar hadduu baxayo, tababarro dibadda ah iyo Hooy u degenaa muddo badan.
Jaamacadda markuu dhammeeyey, gabar sidaas oo kale hay’adda shaqaale u ahayd ayey is guursadeen, wuxuuna ka tirsanaa markaas madaxda hay’adda ee Soomaaliya.
Dhallinyardii kuwii aaday Suudan, labo ka mid ah tahriib ayey galeen 2008-dii, waxayna ku beegnayd xiligii uu shaqada bilaabay, yarkii go’aanka adkaa ee Muqdisho ku haray, mid wuxuu ku dhintay xeebaha Mediterranean ka, kii kalena qaaradda Yurub ayuu galay, laakiin waxbarasho ma uusan galin, kii ku haray Suudaan Muqallas dadka tahriibiya ayuu noqday. Asxaabtii kale ee Pakistaan aaday, kuma wada guuleysan waxbarashada 2 ayaa soo noqotay, labadiina waxey ku kala biireen kooxa Soomaaliya isku haya, oo ugu dambeyna halkaas ayey ku kala dhinteen, mid kale oo isna mardambe soo noqday wuxuu ku biiray labadii joogtay Kampala oo isaga iyo mid kuwii uu yimid ah waxey iska dhiibayaan xeryaha qaxootiga ee Uganda, muddo kadibna Mareykan ayaa loo qaaday.
2013 magaalada Muqdisho kusoo noqonaya 2 dii Pakistan ku hartay mid ka mid ah, oo Master soo dhammeeyey halgan badan kadib. Waxaa Garoonka kusoo dhaweynaya, wiilkii Muqdisho ku haray, markaas gaari weyn wata, laba xaas leh, guri uu leeyahay midi dagan tahay, isbitaal weyn oo hay’addiisa gacanta ku hayso madax ka ah, 4,000$ mushaar ahaan u qaata, dhawr ganacsi oo kala madax bannaan shirko ku ah. Saaxibkiis ayuu dejinayaa Hoteel, wuxuuna u sheegaya inta uu shaqo ka helayo inuu halkaan deganaado, Taxi uu mar walba dalban karo ayuu barayaa, lacag faraqabsi ahna wuu siinayaa.
Ninka dambe ee Pakistaan kasoo noqday ee 2013 imanaya Muqdisho, oo markaas jaamacad macallin ka noqday, ayaa maalin wuxuu weydiiyey ardeydiisa in uu ku jiro qof jecel in uu dibadda waxbarasho u aado, haddii uu heli lahaa fursaddaas, kadibna ardeyda ayaa gacanta wada taagaya badan kooda, markaas ayuu la wadaagay qisadaan isaga iyo asxaabtiisa ku dhacday, si ay uga cibro qaataan. Wuxuu u sheegaya in nolosha aysan go’aamin meesha wax laga baranayo tayadeeda iyo qatarta amnigeeda laakiin waxbadan oo nolosha ka mid ah ay saameyn ku leeyihiin waqtiga iyo duruufta, isma lihii cid markaas da’diina ah oo idinka qorshe fiicneed ayaa jirtay. Haddana waxaa ina kala qeybiyey duruufihii iyo marxaladihii gad-gadoomeyey ee dunida ka socday.